I-ORIGINAL PANTHER SUIT EQHELEKILEYO IYA KUHLALISWA KULUNTU - UMNYAMA OMNYAMA
Abalandeli be I-Panther emnyama, Abantu abaninzi abalungileyo, kungekudala baya kuba nethuba lokujonga ngakumbi imisebenzi yezandla yaseWakandian kubomi bokwenyani.
Ngaba imatriki malunga nokuphuma
I-Smithsonian ibhengeze ukuba izakubonisa isuti yeBlack Panther enxitywe nguChadwick Boseman ngexesha lokuqala kwayo UMnyhadala weFilimu waseMelika Ngo-Okthobha walo nyaka, kwiZiko loLondolozo lweMbali leMbali yaseMelika kunye neNkcubeko eWashington D.C.
IBlack Panther lelona qhawe lokuqala lemvelaphi yaseAfrika ukuvela kumdlalo wokuhlekisa waseMelika, kwaye umboniso bhanyabhanya ngokwawo ngowokuqala kwimveliso bhanyabhanya esekwe kumlinganiswa Imyuziyam yatsho . IBlack Panther ibonisa ukuqhubela phambili kwabantu abantsundu kwifilimu, ishishini ebekade libahoyile abamnyama, okanye libalawula ukuba babe ziiflethi, amanani-macala kunye nabo bahlelelekileyo. Ifilimu, njengemyuziyam, ibonelela ngebali elipheleleyo lenkcubeko yabamnyama kunye nokuzazisa.
Ngokudabukisayo, ayizukuba sisuti kaShuri ephuculweyo ayifumana kwifilimu yakhe ezimeleyo. Endaweni yoko, iya kuba sisuti evela UCaptain America: Imfazwe yamakhaya , kunye nenxalenye yokuqala I-Panther emnyama ifilimu, kunye nesigcina-ntloko. Nangona oko kungenjalo ipholile , isemihle nangoku. Kwaye ngumbulelo ogqwesileyo kumyili wempahla uRuth Carter, owenze isuti.
ubumbano lomlingani wabasetyhini
Ukuthathela ingqalelo ukuba iBlack Panther okwangoku yeyona bhanyabhanya inexabiso eliphakamileyo eyakhe yenziwa ngumlawuli omnyama, lulongezo olufanelekileyo kwingqokelela. Ayisiyiyo ibhokisi yeofisi kuphela ebethelekileyo kodwa ikwayinto ebalulekileyo. Kunye nendleko, iSmithsonian nayo iya kuba nohlobo olusayiniweyo lweskripthi sokufota kunye neefoto ezinesisombululo esiphakamileyo senkqubo yokufota.
Umnyhadala ngokwawo uthembisa ukuba ngumnyhadala wolonwabo. Izakubonisa ngaphezulu kweefilimu ezingama-60, kubandakanya neefilimu ezivela kukhuphiswano lwezomthetho, iifilimu ezimenyiweyo, kunye neefilimu ezivela kwingqokelela yabucala. Ukongeza, kuya kubakho iingxoxo nabenzi beefilimu kunye nabaphengululi beefilimu, imiboniso, kunye neeklasikhi zobugcisa ekwenzeni ifilimu, ukuhlela nokubaliswa kwamabali.
Unjingalwazi ford go undixhase
Ngelixa umthendeleko uqala kuphela nge-24 ka-Okthobha ukuya kwi-27 ka-Okthobha i-27, imyuziyam yatsho ukuba ijonge ukwenza isinxibo sibe yindawo ehlala ihleli. Kulusizi ukungafumani ndlela yokufumana isinxibo esitsha kwimali mboleko, ngakumbi kuba bayifuna nje iintsuku ezimbalwa. Ndiyathetha, akufani nokuba u-T'Challa uyayifuna ngoku.
(nge I-Nerdist , umfanekiso: Marvel / Disney)
Ingoma Yomkhenkce Nomlilo
Iminqweno yeeninja yolutsha olufikisayo ibamba amabinzana
ilivo lekorra isityhilelo
Ummeli wecarter ixesha lesi-2 isiqendu 1
shaye st john into yesandla
abamnyama nabamhlophe bahamba beswelekile